neuralgia နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်3ကုစား - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - neuralgia နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ "3 ကုစား
neuralgia နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်3ကုစား - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
Tele RELAY တစ်ခု 31 ဇူလိုင်လ 2019
Neuralgia လျှပ်စစ်ရှော့ခ်တစ်မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်တဲ့အာရုံခံရောဂါ ဦးခေါင်း, မျက်နှာသို့မဟုတ်လည်ပင်း၌တည်၏။ တစ်ဦးကအလွန်နာကျင်ခွအေနအေ။ ဤဆောင်းပါး၏ကျန်ရှိသောတှငျကြှနျုပျတို့သဘာဝအလျောက်ကုစားထံမှ neuralgia ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။
ခေါင်းစဉ်ဆောင်းပါးထောက်ပြအဖြစ် neuralgia နှင့်အတူပြည်သူ့များသောအားဖြင့်ပိုမို 50 နှစ်ပေါင်းများ Trigeminal neuralgia: ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးဆုံးနာကျင်မှု?။ သို့သော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောရောဂါလက္ခဏာများသောအားဖြင့်တစ်ဦးမမှန်ဖြစ်ရပ်ရှိပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်း ဒါကြောင့်လူနာအဘယ်သူမျှမလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းရက်သတ္တပတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအလွန်ခက်ခဲရောဂါကို neuralgia ရှိမရှိသံသယချပစ်လိမ့်မည်။ ဒါကအချိန်မီကုသမှုခက်ခဲအစအဦးကိုမှန်ကန်စေသည်။
တချို့ဖော်ပြခြင်းမပြုမီ သဘာဝကကုစား ကြောင်း neuralgia ဆက်ဆံဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီဖြစ်နိုငျသညျ, ကဆရာဝန်ကိုသွား၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။ အဲဒီ options ပြဿနာကိုဖြေရှင်းကြဘူး, သူတို့သာလူနာပိုကောင်းခံစားရကူညီ.
တကယ်တော့မျှအားဖြင့်ငါတို့သည်တင်ပြရွေးချယ်စရာများသင့်ဆရာဝန်အကြံပြုစေခြင်းငှါကုသမှုကိုအစားထိုးလို့မရဘူးဆိုလိုသည်။ ရောဂါ၏ဤအမျိုးအစားသတ်သတ်မှတ်မှတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများလိုအပ်ပြီး, အချို့ကိစ္စများတွင်ခွဲစိတ်ကုသမှုဆောင်းပါးထဲမှာကရှင်းပြသည်အဖြစ် Trigeminal neuralgia: ရောဂါနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်ပြင်သစ်ပထမဦးဆုံးအကြံပြုချက်များ.
1 ။ Elderflower
Elderflower ဟာအလွန်လူကြိုက်များ neuralgia ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ neuralgia များအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုငျကွောငျးအခြို့သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်ကြောင့်အမှန်စင်စစ်ဤပန်းပွင့်ကျယ်ပြန့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးပညာအသုံးပြုကြသည်။ အဆိုပါ elderflower ဖြစ်ပါသည်:
ပျော့ပျောင်းစေရန်သုတ် : ပြင်ပမှအသုံးပြုပါကရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်ကူညီပေးသည်။
antispasmodic : ဒါဟာလျှပ်စစ်လှုပ်ခြင်း၏အာရုံခံစားမှုကာကွယ်ပေးသည်။
veinotonic : ဒါဟာသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုအားပေးအားမြှောက်။
ဒီသဘာဝဆေးတစ်လက် Topic လျှောက်ထား။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရိုးရှင်းစွာအကွီးအကဲအရွက်၏တစ်ဦးပြုတ်ရည်ထားကြ၏။ ထိုအခါသင်သည်ထို့နောက်ဦးခေါင်း, မျက်နှာသို့မဟုတ်လည်ပင်း၏ဧရိယာ၌လျှောက်ထားပါလိမ့်မည်သည့်ရလဒ်အရည်, ချုံ့စိမ်ရန်ရှိသည်။ အဆိုပါကယ်ဆယ်ရေးမကြာမီရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်လည်းကြိုက်နှစ်သက်စေခြင်းငှါ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းစေရန်4တာဟာ
2 ။ neuralgia ရင်ဆိုင်ဖို့ Vetiver
Le vetiver အဘယ်သူ၏အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုသည်၎င်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Format ကို၌တည်ရှိ၏အပင်တစ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာက၎င်း၏ပြော့နဲ့ anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများက neuralgia နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မဟာမိတ်လုပ်ရမည်။
သို့သော် neuralgia ဆန့်ကျင်အမှန်တကယ်ထိရောက်သောဖြစ်ဒါဟာစက်ရုံများ၏အမြစ်မသွားအောင်လုပ်ဖို့အကြံပြုသည်။ ဒီခြေလှမ်းတပြိုင်နက်, ပြုတ်ရည်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပွတ်တိုက်မှုအသုံးပြုပုံဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့ (ဦးခေါင်း, မျက်နှာ, လည်ပင်း) ၏အပြင်ဘက်၌အလွှာဖို့လျှောက်ထားရပါမည်။
3 ။ arnica
အဆိုပါarnica ရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာဖို့အသုံးပြုနိုင် neuralgia ဆန့်ကျင်နောက်ဆုံးပေါ်ကုစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်စက်ရုံမျိုးစုံဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်သောအဝါရောင်ပန်းပွင့်ကိုထုတ်လုပ် ပြဿနာများ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးပြုမူဆက်ဆံရန်။ Arnica အခြားသူတွေအကြား, သည်:
ဒီဆေးတစ်လက်ကိုအသုံးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ဦးကအရေပြားပေါ်မှာလျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအဘို့, ကျနော်တို့ arnica တစ် tincture သုံးပြီးအကြံပြု။ ဤသည်ကိုရေ၌ရောလျက်ပါလိမ့်မည်နှင့်ထိခိုက်ဒေသများသို့နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိပ်နယ်ခြင်းဖြင့်လျှောက်ထားပါလိမ့်မည်။
ဤအကြံပြုချက်များ neuralgia ရင်ဆိုင်ဖို့3နေသော်လည်းထိုသို့မှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ် neuralgia တစ်ဦးတည်းထိုအချက်ကိုအားဖြင့် "ကုသ" မရနိုငျ။ ဒါဟာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လုံလောက်သောဆေးကုသမှုရှိကြောင်းမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
တကယ်တော့, ဤအကုစားဆရာဝန်များအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်ရှိသူများဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကပိုလုံခြုံဟုခံစားရချင်တယ်ဆိုရင်မူလတန်းကုသမှုအဆိုပါသဘာကုစား၏လျှောက်လွှာအားဖြင့်ထိခိုက်နိုင်လျှင်သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဝန်ကိုမေးလို့ရပါတယ်။
ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်ဆေးဝါး anticonvulsants နှင့်ကြွက်သားအပန်းဖြေဖြစ်ကြသည်။ သွင်း Botox (အလွန်သေးငယ်တဲ့ဆေးများခုနှစ်တွင်) ကိုလည်းအကြံပြုနိုင်ပါသည်။
သင်၌စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်: Corticosteroids မူးယစ်ဆေးဝါး: ကဘာလဲ?
အများဆုံးပြင်းထန်တဲ့ကိစ္စများတွင်ခွဲစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းပါပဲ။ ဒါဟာအမြစ်မှာပြဿနာ fix ကလူနာများ၏ဘဝခြိမ်းခြောက်ရန်ဆက်လက်တားဆီးဖို့တစ်လမ်းပါပဲ။ သို့သော်သာမူးယစ်ဆေးဝါးများခေါ်ဆောင်သွားကြသည်ရှိရာအထက်အမှု၌, စာရင်းဝင်ကုစားတို့သည်ကြီးစွာသောအဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအစဉျအမွဲ neuralgia နှင့်အတူရောဂါခဲ့ဖူးသလော ခံစားနေရပြီးသူသင်တို့ပတ်လည်တစ်စုံတစ်ဦးကများရှိပါသလား ကျနော်တို့ကသင့်ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းကုသမှုအပြင်အဆိုပါသဘာကုစားသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်လျှင်သင့်ဆရာဝန်ကိုမေးရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။
သူတို့ကိုသင်စတင်သုံးစွဲလျှင်, ငါတို့သည်ရလဒ်များကိုလျင်မြန်စွာပေါ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှင့် သင်အသက်တာ၏ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုရှိကူညီပေးပါမည်သည့်တိုးတက်မှုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
Fibromyalgia အမျိုးသမီးတစ်ဦးအလွန်ဘုံရောဂါဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါဆောင်းပါးမှာတော့ကျနော်တို့ကကုသရန်ကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝအနညျးလမျးမြားကိုတင်ပြ။ Read more »
သင့်ရဲ့အံသွားနှင့်ရောဂါကူးစက်မှုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲ၏စောင့်ရှောက်မှုတာသိကောင်းစရာများ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
ဆိုးဆိုးရွားရွားဟောက်တတ်တဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့4အခြားရွေးချယ်စရာကုသမှု - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ